Kamerona: Dia Ahoana Raha Tsy Mandeha Mifidy Isika Amin’ny 9 Oktobra? · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Claire Ulrich
Voadika ny 27 Septambra 2011 17:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Aymara, Français
Miezaka manamarina io tsy firaikàna io ny bilaogy momba ny politika, Cameroun Libre et Solidaire [fr]:
Ny olana goavana iray ao Kamerona dia ny tsy firaikàn'ny vahoaka amin'ny resa-politika. Be loatra ny fampanantenana poak'aty nataon'ireo mamba noana naniry fotsiny ny hahazo toerana hihinànana. Ny vokany dia tsy betsaka akory ny olona nanoratra ny anaran'izy ireo any anaty lisi-pifidianana ary tsy handeha hifidy. Ao anatin'io ampahany betsaka amin'ny mponina io no mipetraka ny fanamby, miandry fotsiny ny ho resena lahatra hoe mbola azo atao ny manantena. Kanefa…. Ny antoko mpanohitra SDF dia niantso … fanaovana ankivy. Mety hampanontany tena ny tsirairay ny amin'izay tanjona kendren-dry zareo. Nefa mety ho foanana ve ny fifidianana satria hoe ambony be ny tahan'ny tsy fandraisana anjara? Sanatria.
Paul Biya, niteny tao amin'ny Firenena Mikambana tao an-tanànan'i New York, dia efa filohan'i Kamerona hatramin'ny 1982. Sary avy amin'ny Flickr an'ny Firenena Mikambana, eo ambanin'ny CC BY NC ND 2.0 licence.
Ny kandidà tokana hany afaka handresy ny Filoha Paul Biya, izay tondroin'ny sasany ho mpanao jadona [fr] ary eo amin'ny fitondràna nanomboka ny 6 Novambra 1982, dia i Paul Biya tenany ihany. Na dia tsy nahagaga loatra aza ny fametrahany firotsahana ho fidiana handimby ny tenany, niteraka savoritaka kely teo amin'ny fomba fihevitry ny olona ihany ilay izy.
Na izany aza, raha zohiana akaiky, mety ho voatery hino ihany hoe eto amin'ity firenena ity dia tsy misy ny tena fanoherana marina, ampy hery ho entina manozongozona an'i Paul Biya. Izay fomba fijery izay dia amarinin'ny zava-misy hoe ao anatin'ireo 21 mpilatsaka ho fidiana nofantenan'ny Komitim-Pifidianana, tsy dia misy iray miavaka loatra, araka ny anambaràn'ity bilaogera ity azy [fr]:
Marina fa ao anatin'ireto kandidà maro ireto, dia ho hitanao ireo nitonona hatrizay ho mpanohitra, toa an-dry John Fru Ndi, Adamou Ndam Njoya, Jean Jacques Ekindi … Marina ihany koa fa ao ireo tsangan'olona fotsiny, milalao amin'ny anaran'i Paul Biya, na, tsy isalasalàna, nentin'ny dehaka fotsiny. Ny marina dia, ao amin'ireny firotsahana ho fidiana somary kidaladàla ireny, ny aloky ny tanàn'ny antokom-panjakana no hitantsika ao, ny CPDM. Raha tsy izany, fomba ahoana no nahafahan'ireny olona ireny, izay tsy fantatra akory na teo amin'ny faritra nonenany aza, izay tsy lany akory ho mpiasam-bahoaka olom-boafidy akory ary tsy mpikambana aminà hetsika ara-politika na inona na inona, no nanangona ny sonia ilaina amin'ny fametrahany ny antontan-taratasy firotsahana ho fidiana?
Sary vaventy fanentanana mba hanoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana, ao Douala, Kamerona, Jolay 2011 – Sary an'ilay mpampiasa Flickr, verni22im, navoaka ambanin'ny CC BY licence.
Fa aiza ny mpanohitra eto Kamerona e? Tsy misy na iray aza, araka ny filazan'i Allain Jules ao amin'ny bilaoginy [fr]:
Tsy misy. Izay no azo lazaina. Tsy firaharahiana mivandravandra. Tsy misy harapaka. Na inona na inona antony, na eo aza ny halemen'ny fitondràna ao an-toerana. Indrindra indrindra fa hatramin'ny firaisana petsapetsan'ny antoko mpanohitra isan'ny lehibe indrindra teto Kamerona, ny Social Democratic Front (SDF) an'i John Fru Ndi tamin'ny RDPC an'i Paul Biya; tantaram-pitiavana nirafitra nanomboka tamin'ny nandefasan'ny Lapan'ny Etoudi (Lapan'ny Filoham-panjakana) an'itompokovavy vadin'ny filohan'io antoko mpanohitra io hotsaboina tany Frantsa, tsy toy ny teo aloha intsony ny zavatra rehetra. Aoka isika hiatrika izany: androany, tsy ho resy mihitsy ny RDPC, na tsy hisy aza ny hala-bato.
Amin'izay làlan-jotra izay ihany, ny vohikalam-baovao Slateafrique.com dia mamoaka fandalinana iray [fr] nataonà Kamerone iray malaza, Mathi Eric Owona Nguini, mpandalina ara-politika :
Tratry ny fanangolena amin'ny ampahany betsaka ny mpanohitra. Reraka ireo mpitarika azy ireny, ary ny tena fahavoazan-dry zareo dia ny tsy fahampian'ny fandaharan'asa sy soso-kevitra ideolojika. Fanampin'izany, voasamantsàmaka izy ary tsy ampy mpitarika. Izay manome vàhana mazava loatra ny antoko mitondra, izay efa ela teo amin'ny fitondràna sy ampy fahaiza-manao kokoa.
Na izany aza, ao anaty lahatsoratra [fr] iray nivoaka tamin'ny 2010, ilay mpahay toekarena, Thierry Amougou, tonga saina momba io olana io, dia niantso ny Kamerone tsy hanadino sy tsy ho voarebirebin'ny fitondrana eo an-toerana indray, mampahatsiahy azy ireo zava-manan-danja nanamarika ny “vanim-potoana” Paul Biya teo amin'ny fitantànana ny Fanjakana Kamerone:
Na dia mampiseho aza ny fitsapan-kevitra eran'izao tontolo izao fa ny safidin'ireo mpifidy dia, amin'ny ankapobeny, nobaikoin'ireo zava-nitranga tsy ela akory efa ho enim-bolana eo ho eo miohatra amin'ny datin'nadrom-pifidianana, mila manana fitadidiana lasa lavidavitra kokoa ny Kamerone amin'ity indray mitoraka ity. Tsy vao dimy na folo taona akory no niharitra ny tsy fahaiza-mitantan'ny Renouveau National ry zareo, fa efa ho telopolo taona mihitsy.
Ny maha-very tadidy, tamin'ny 2011, dia tsy fitodihana amin'ny hoe ny tanjon'ireo “kilalao politika” dia ny hanaovana izay hanadinoan-dry zareo
- ireo fanovàna samihafa tamin'ny lalàm-panorenana dia manome vàhana rangahy iray ihany
- ny fananganana ny Elecam, fa tsy kaomisionam-pifidianana tena mahaleotena marina;
- ny famonoana ireo tanora Kamerone tamin'ny Febroary 2008;
- ary ny [fanaoherana ny kolikoly] Opération Epervier, vokatry ny faharatsiam-pitantanana nataon'ny Renouveau National nandritra ny 30 taona . ».
Eo anatrehan'izay zava-misy izay, mety ho voasarika hisaina ny tsirairay hanontany tena mikasika ny amin'ny hoavin'ity firenena ity, izay tsy nanam-pitsaharana nandritra ireo andro lasany [fr], ary ny filohany amin'izao fotoana izao tsy afaka velively ny hanatratra ny hoe lanim-bahoaka.